China Hydraulic Press Mugadziri uye Mutengesi | Hanrui
Hydraulic muchina ndeimwe yemidziyo yekuyedza iri kuputika simba repombi. Tora nzira yechiso chisimbiso uye radial chisimbiso, gadzirisa kune yepasi rese isina kuvharwa kabhoni simbi pombi, isina simbi pombi, titanium chiwanikwa pombi, yakakosha-yakaumbwa coil, uye imwe pombi inoputika simba bvunzo! Iine mashandiro epamberi bvunzo yekumhanyisa, kumanikidza bvunzo kuongorora, kudhizaina, nezvimwewo PLC kutonga, advanced chimiro, kugadzikana kushanda.
Hydraulic muchina: Hydraulic muchina ndeimwe yemidziyo yekuyedza iri kuputika simba repombi.
Yedu hydraulic yekuyedza muchina zvigadzirwa zvakaiswa mukushandiswa mumakambani mazhinji, uye zvakakunda kurumbidzwa uye kuzivikanwa kwevatengi vane hunyanzvi hwehunyanzvi uye hwakavimbika mashandiro.
Yakabatanidzwa zvigadzirwa zvekugadzira:
NeCNC lathe, vese vanoshanda vakapasa hunyanzvi hwekudzidzira hunyanzvi uye vanoshanda mukuomerera zvinoenderana neyakajairwa bhizinesi uye ISO9001 standard.
Independent pfapfaidzo dumba kuona kugadzirwa anosangana kwezvakatipoteredza kudzivirira zvinodiwa.
Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd. yakahwina mukurumbira wakanaka weyakagadzika hydraulic yekudhinda, ASTM yakajairwa pombi, yemakwikwi mutengo uye yakanaka mushure-yekutengesa sevhisi (kunyanya yakareba-yakareba yakagadzikana spare zvikamu zvekugovera). Parizvino, vatengi vanobva kuAsia, Middle East, North America neEurope vakashanda pamwe nesu, uye zvisiri-zvakajairwa hydraulic bvunzo / stamping michina yakabatsira zvakanyanya vashandisi mumakwikwi emusika.
Iyo inowanzo shandiswa mupombi bvunzo senge isina musono simbi pombi, isina simbi pombi, titanium chiwanikwa pombi, mhangura pombi uye aluminium pombi. Tenet yedu hombe tenet ndeye kuburitsa hydraulic yekudhinda kuti ipe yepamusoro uye yemhando yepamusoro yekuyedza michina yekuzadza mukaha mumusika. Iyo hydraulic yekudhinda inogona kukamurwa kuita otomatiki mhando uye echinyorwa mhando. Rudzi rwemanyoro runogona kuyedza mapaipi mana panguva imwechete, asi inoda basa remaoko. Positioning, kuiswa chisimbiso, kuomesa uye kudzvanya kunoitika. Kureba kwepombi kunogona kugadziridzwa ne2-15m kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvisina musono pombi mutengi.
Otomatiki mhando: imwechete chubhu inogona kuyedzwa panguva. Iyo chubhu inoerekana yapinda mudura, otomatiki inogadzira zvinhu, otomatiki mhando, zvinzvimbo, zvinotsvaira, zvisimbiso, zvinosungisa uye zvinodzvanya zvese otomatiki; iyo chikamu chezasi rakadzika rongedza otomatiki zvigadzirwa zvechokwadi uye zvakaremara. Inoita basa rakakosha mukugadzirwa chaiko. Imwe ndeye kusevha mutengo, asi kuchengetedza basa uye kugadzirisa mwero wekumutsiridza wepombi. Iyo hydraulic yekudhinda inogadzirwa nekambani yedu inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwehunhu kugadzirwa kwevagadziri vepaipi, uye yakakosha uye yakakosha kuona uye yekushandisa nyunje. Iye zvino yakagadziriswa zvinobudirira: bhuku remhando uye otomatiki mhando.
Pashure: Mhepo compressor
Zvadaro: Rt-50fa Kuchengetedza kaviri-Musoro Chamfering Muchina / Round Tube Chamfering Machine
Carbon Simbi Tube Hydraulic Press
Hydraulic Press Midziyo
Yakakura Hydraulic Press
Musono Pipe Hydraulic Press
Stainless Simbi Pipe Hydraulic Press